Fampielezan-kevitra sahady ny vatofehizoron’ny kianjan’ny baolina lavalava teny Andohatapenaka ! – MyDago.com aime Madagascar
Eny an-kianja hatrany no mbola ahazoan’ireo zanak’i dada mifampita vaovao sy mitondra fanazavana mahakasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Androany dia mbola nitohy ny hetsika tetsy amin’ny Magro Behoririka. Ny CST Ravelonanosy Mamitiana dia nitondra valinkafatra ho an-dRajoelina izay nitokana ny kianjan’ny baolina lavalava teny Andohatapenaka ny Sabotsy teo. Raha tadidintsika tsara hoy izy ny tantara dia io tanimena io no anisan’ny nanenjehana ary nitaomana ny olona teny amin’ny kianjan’ny 13May. Telo taona aty aoriana hoy Mamitiana dia izy indray no mankeny ary milaza fa mety io ho an’ny tanora. Inona ihany no marina hoy ny fanontaniana napetrak’ity olomboantendry ity. Ohatry ny mamofopofona fampielezan-kevitra sahady ilay izy.Araraotina hoy izy ny fahazoantsika ny tompondaka, kanefa efa tamin’ny andron’ny filoha Ravalomanana no nanampiana ny rugby fa vokatra io. Raha ohatra ireny hoy Mamitiana ny olona hilatsaka hofidiana dia asakasakareo mpanao rugby. Mahakasika ny fihaonana faharoa atsy Seychelle voalaza fa atao rahampitso dia nambaran’ity mpanao politika ity fa raha ny marina dia tsy tokony hisy intsony ny fihaonana faharoa. Ny an’ny Malagasy hoy izy dia mazava fa efa nisy ny tondrozotra ka tokony hampiharina izany, fa mila vaniny fotsiny Rajoelina. Noho izany dia antso ho an’ny sehatra iraisam-pirenena hoe tsy adala akory ny vahoaka Malagasy raha hitaky ny filatsahan’ny filoha Ravalomanana. Ny antony hoy Mamitiana dia tsy olona mpanongam-panjakana no hitondra ny firenena. Raha ny vahaolana amin’ity tany ity dia ny fiverenan’i dada eto Madagasikara. Tsotra ny an’ny ankolafy Ravalomanana hoy izy dia ny fampiharana ny voalazan’ny tondrozotra indrindra ny fiverenan’ireo sesitany politika any ivelany. Tsy hitaky intsony izahay hoy Mamitiana fa rehefa tonga i dada dia hainy ny sisa rehetra. Nanafatra ny vahoaka ihany koa ny tenany mba hivavaka ho amin’ny fihaonana atsy Seychelle ary ny fisian’ny firaisankina. Ny filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanana eto Madagasikara Ralaiseheno Guy Maxime kosa dia nilaza fa fampitam-baovao iny nataon-dRajoelina ny Sabotsy teo iny, Manana ny toerany ao amin’ny fanaovana politika hoy izy ny fampitam-baova. Nambarany ihany koa fa ny Sadc amin’ny vanimpotoana hamaranana ny krizy dia tsy miatehitra amin’iza na amin’iza intsony. Tsy maintsy nihaona tamin’ny filoha Ravalomanana, ingahy Ranjoelina hoy izy. Aorian’ny fihaonana dia tsy maintsy hamoaka fehinkevitra, ary tsy miala amin’ny tondrozotra ny Sadc ka hampody ny filoha Ravalomanana, hanokatra ny haino aman-jery nakatona, hamoka ny gadra politika. Tsy misy fihaonana intsony hoy Guy Maxime aorian’io any Seychelle io. Noho izany dia tsy manana vahaolana intsony Rajoelina.
5 pensées sur “Fampielezan-kevitra sahady ny vatofehizoron’ny kianjan’ny baolina lavalava teny Andohatapenaka !”
Tahotra no betsaka ka tohanana daholo izay miseho ho be sadry sy be MOKONY
ary rahonana sy gadraina izay tsy manaiky HO VIDIANA toy izao hividianany ny
Bė SETROKA izao.Aza moramoraina ilay zavatra fa tsy mila izany fifidianana izany izy fa tonga dia AZY NY FANJAKANA
toy izao hataony izao, tsy misy hirarahiany an’izany fa fantany fa tsy HISY HIFIDY AZY EO , matoa ho tonga @’izany fifidianana
izany @’izao dia efa miomana @ HOROHORO vokatry ny RAMATAHORA SY FANGEJANA maro raha mbola ireo no eo,
ary ny HABIBIANA samihafa.
ary toa Adinon’ny Solo razafy mihintsy ny manambara an’ireto zanak’i dada ireto fa ho lanin’ny kisoa ao Sudaf ange i de8 e, fa maninona raha mba lazainao izany ry journaliste. Raha tsy ry Zuma izany naman’ny de8 mihintsy manko no hanambara ofisialy fa criminel io ravalomanana io, ka higadra aty antaninay aty.
Mba ilazao ry Solo razafy fa sambany teto am fianan’ny Madagasikara no nisy president notsaraina any antanin’olona izany dia ny SEM Ravalomanana, Andriamanitry Ranaval.
Miarahaba anireo zanak’i Dada rehetra izay hita fa tena fitiavana marina no manosika anizy ireo mankeny aminy MAGRO behoririka.Jerevo fotsiny ange ireo olona tonga ao fa tena
matotra daholo.Ny any TGV kosa dia hita fa mifanohitra aminizany, jerevo fa olona tsy nisy nianatra mitovy aminy daholo no sady voasisika vola fotsiny
Tena lalim-pandinihana enao Rasamy an!!!mbola azoko sary an-tsaina marina ny qualitén’ireo foza voafitaka teny @ 13 Mai t@ faraparany ireny an!
Mila miofana DAHOLO NY VAHOAKA MALAGASY !!
Lasa lamaody ity hoe « renforcement de capacité » ity tato ato ! Renforcement de capacité etsy sy eroa isan’andro izao !!
Any ka tena azoko lazaina hoe : Ireo izay niangaran’ny vintana ka mba afaka nandrato fianarana, dia tena mbola mila miofana amin’izany hoe : Renforcement de capacité en matière de réflexion patriotique, économique et politique au sens strict du terme !
Lasa resaka be indray androany, ny faniliana an’Atoa Rakotoarivelo, ary dia izao indray ireo « be resaka » (efa fantatra hatry ny ela ny tetika) no misikotra an’i Fetison hilatsaka, ho ben’ny tanànan’Antaninarivo sy…..!! Ny anaran’ny antoko TIM ihany anefa no toa hoe entina hanaovana an’izany !!
Dia mbola azo lazaina fa misaina marina ve ireo izay nianteheran’ny Filoha Ravalomanana ary indrindra ny vahoaka malagasy ?
Aza mihevitra ny rehetra ho dondrona sy vongany mihintsy ianareo !!
Namoaka fanambaràna ny mpanongam-panjakàna vao tsy ela momban’izany hoe « ethique politique » ! Hoy ilay vendrana : » Cette Loi met en avant le respect de la Constitution, de la Feuille de route et des Lois en vigueur (source Tananews) » !
– Constitution inona ? Ilay Constitution fôpla tsy eken’ny Communauté internationale ve ?
– Feuille de route inona ? Mba narahina araky ny fifanekena, ary ny rariny sy ny hitsiny ve ilay tondrozotra ?
– Respect des Lois en vigueur ? Mpanongam-panjakàna sy mpampiorohoro vahoaka ve no ekena HAMPIANATRA AN’IZANY HOE LALÀNA IZANY ?
Tsy misy midrikina, fa toa samy manamboatra ny fiarovana an’ity tombotsoa-keliny daholo, NA DIA MIHINANA NY MALOTONY AZA NY VAHOAKA ??
TENA MIHEVITRA MARINA NY HIARO NY VAHOAKA SY NY SAFIDINY VE IREO MILAZA FA TENA MPANAO POLITIQUE IREO ???
Izany Ni ni izany, tsy hanaiky an’izany ny vahoaka ; meloka lavitra noho ireo mpanongam-panjakàna, izay rehetra mivoy an’izany !
Précédent Article précédent : Juan de Nova : Oil and GasY (bad) story – 2eme partie
Suivant Article suivant : Génération Ravalomanana